10 Dzinonakidza Chokwadi Iwe Wausina Kuziva Nezve Ecommerce | ECommerce nhau
10 Inonakidza Chokwadi Iwe Wausina Kuziva Nezve Ecommerce
Ecommerce ndiro bhizinesi rinozivikanwa zvikuru uye rinoda mazuva ano. Wese munhu anoziva nezve e-commerce nezvakanaka zvacho.
Uye zvakare, kune yakawanda nhamba yemapuratifomu e ecommerce webhusaiti dhizaini saMagneto, Joomla, Drupal, nezvimwe.
1 Aya ndiwo gumi echokwadi chokwadi iwe ungasaziva nezve e-commerce
1.1 Chokwadi chinonakidza nezveEcommerce
2 Dhata pane zvemagetsi zvekutengesa muSpain
2.1 Kutenga pamhepo izvo zvave zviri mukugadzira kwenguva yakareba
2.2 Nzira inosarudzwa yekubhadhara muSpain
2.3 Iyo boom mu "mazuva ekudzikisira"
2.4 Tsika ye e-commerce iri kuchinja
Aya ndiwo gumi echokwadi chokwadi iwe ungasaziva nezve e-commerce
Chokwadi chinonakidza nezveEcommerce
Kupfuura 67% yevanhu vanofarira kutenga kuburikidza nharembozha yavo pane yavo laptop, uye mamwe masystem: munhu wese anoziva kushandisa nharembozha uye kushandisa akawanda mafomu.
Mukutanga kwegore ra2015, kutenga smartphone kwakaverengerwa makumi matanhatu muzana ezvese kutengesa mafoni.
Nhamba yakakura kwazvo yekutenga pamhepo pasirese iri kubva kuAsia uye chikamu neSouth Korea.
Apparel uye accessories kutengesa ndiyo inokurumidza kukurumidza chikamu mu e-commerce.
33% yema mobile transaction ese akaitwa pasirese ari kubva kuUnited States.
68% maCanada nemaBritish vanotenga chigadzirwa pamhepo kunze kwenyika yavanobva.
Gore rino (2017), mobile commerce inomiririra 24% yemusika wepasi rose e-commerce.
95% yevashandisi veTwitter vanoshanyira mawebhusaiti ekutengesa achienzaniswa nevamwe vashandisi veinternet - izvi zvinoreva kuti ese e-commerce mabhizinesi ari kuisa pfungwa uye kugadzira vateveri vazhinji paTwitter kupfuura vamwe.
Ecommerce ibhizimusi rinokurumidza kukura - munhu wese anozviziva, nekuti zvinobatsira vatengi kuchengetedza nguva yavo nesimba.
Vatengesi vazhinji uye vazhinji vanofarira kuona chigadzirwa online kwete kuenda kuchitoro uye kuona chigadzirwa panyama.
Dhata pane zvemagetsi zvekutengesa muSpain
Munyika yega yega, zvemagetsi zvekutengeserana zvinoita zvakasiyana. Pane zvimwe nyika umo shanduko yeiyi yave yakakura, uye iri pamberi pevamwe; uye nekupesana, nyika dzavasati vashandukira kusvika padanho rehukuru. Kuti ndikupe pfungwa, zvinozivikanwa kuti izvo zvinoitika muUnited States, muSpain hazviuye kusvika mushure memakore mashoma, izvo zvinobvumidza vazhinji kuti vasvinure kuti vawane izvo zvinozoita zvemufashoni nekutora mukana izvo hazvisati zvava zvekutanga.
Ndosaka zvakakosha kuti uzive imwe dhata pane zvemagetsi zvekutengeserana kuSpain kuti uzive shanduko dzinogona kumuka.
Iye zvino, Spain iri munzvimbo dzekutanga dzekutengesa zvemagetsi muEurope. Icho hachisi chakaipa chimiro, kunyanya tichifunga kuti mumakore achangopfuura kutengeserana kwemagetsi kwakawedzera. Vanhu vazhinji uye vazhinji vari kusarudza kunotenga pamhepo pachinzvimbo chekuenda kuzvitoro kunotsvaga zvigadzirwa. Kana isu zvakare tichifunga nezvekuti kune zvakawanda zvakasiyana uye neInternet, kupihwa kwakanyanya, kugona kuwana chinenge zvese (kana zvisiri zvese) kuburikidza neyekutengesa zvemagetsi.
Kutenga pamhepo izvo zvave zviri mukugadzira kwenguva yakareba
Kunyangwe paine chokwadi chekuti vazhinji vatangisa uye vari kuwana nhasi kuti chii chemagetsi kutengeserana, chakanaka uye chakaipa chekutenga online, uye nemikana yainokupa, chokwadi ndechekuti, maererano nedata iri kutariswa, yatove iyo 64% veSpanish vanga vachitenga online kubvira pamberi pa2012, chimiro chiri pasina mubvunzo chiri kuwedzera zvishoma nezvishoma. Ziva kuti vana nevechiri kuyaruka vari kuwedzera kujairana nehunyanzvi hutsva, zvinoreva kuti kwavari chitoro chepamhepo hachisi chinhu chitsva, asi nzira yekuwana zvavanoda vasina kumbobva pamba.
Ehezve, inopfuura hafu ye100% kubvunza pamberi pemaforamu ekufunga, mablog, nezvimwe. kutsvaga avo vatengi vane izvo zvigadzirwa kuti vaone kana zvakanaka kana kuti zviri nani kuzvipfuudza. Izvo zvinoenda kune mukurumbira mukurumbira pamhepo. Kana chitoro chisiri kuzivikanwa, vanhu vazhinji vanotsvaga paInternet kuti vaone maonero acho, kunyanya kana mitengo yadzinopa iri yakachipa kwazvo kuti isaratidzika kunge yechokwadi.
Chimwe chokwadi chekufunga nezvacho mhando yezvigadzirwa nemasevhisi anotengwa online. Kusvikira makore mashoma apfuura, kufamba, matikiti, uye kufonera foni zvakanyora runyorwa; zvisinei, ikozvino zvigadzirwa zvevaraidzo uye zvevaraidzo, tekinoroji uye kunyange zvipfeko zviri kuwedzera.
Nzira inosarudzwa yekubhadhara muSpain
Nezve iyo nzira yekubhadhara, kunyangwe mu2014 kuwanda kwaive kushandiswa kwePayPal, izvozvi zvinhu zvachinja. Vanhu vazhinji uye vazhinji vari kusarudza kadhi rechikwereti. Nei paine shanduko? Zvinonzwisisika. Pakutanga, e-commerce yaionekwa senzira yeku "scam" mune dzimwe nguva. Vazhinji havana kuvimba nekupa yako data, ndoda kubhengi, uye kushandiswa kwePayPal, kwaungofanirwa kupa iyo email, uye zvakare waive nekambani iyo, kana mushure memwedzi miviri usati wagamuchira chigadzirwa, chaive chevarombo mhando kana haina kukugutsa, iwe wakadzorerwa mari yako usina kunetseka nezve chero chimwe chinhu.
Zvino, hazvireve kuti tinogona kutaura kuti kadhi rekubhangi rakachengeteka, nekuti tinogona kutenga uye kusawana izvo zvigadzirwa, asi vashandisi vari kuwedzera kurishandisa pakutenga kwavo. Uye zvakare, inofanirwa kutariswa kuti mazhinji e-mabhizinesi haape akasiyana munzira dzekubhadhara. Ichi ndicho chikonzero kana zvasvika pakutenga kubva kunzvimbo dzisingazivikanwe, vanhu vanowanzo tsvaga maonero kana pasina mukana wekubhadhara neimwe mhando yeinishuwarenzi.
Iyo boom mu "mazuva ekudzikisira"
Cyber ​​Muvhuro, Nhema Chishanu, Amazon svondo ... zvinoita sei kwauri? Izvo zviitiko, zvese zvepasirese uye zvepasi rese, mune izvo 'zvinopihwa' zvinowanikwa. Vashandisi vari kuwedzera kuziva nezve nguva idzo pavanowana mibairo mikuru.
Asi sekushambadzira kwekambani yenguva diki 'tsvuku' ichiti: "isu hatisi mapenzi." Vashandisi vakangwara, uye chokwadi chekuti chigadzirwa chiri kutengeswa hazvireve kuti vari kuzotenga usina kutanga watarisa kana chiri chipo chaicho.
Vanozviita sei izvozvo? Kuburikidza nemapeji emapeji anopa shanduko yemitengo yechero chigadzirwa. Nenzira iyi, mushandisi anogona kuona kana izvo zvaari kuda pamazuva akakosha ari kunyatso kutengeswa kana kana mutengo wawedzerwa mazuva kana mavhiki asati aisa pane iyo yaive pamberi peichi chiitiko.
Izvi zvinogadzira kusagadzikana. Izvo hazvina kufanana pawakaenda uchitengesa uye iwe hauna kuziva zvechokwadi kana ivo vakaidzikisa kana chavakaita kukwidza mutengo. Asi ikozvino izvo "zviteyeso" zvevatengesi zvinogona kubatwa, izvo zvinokanganisa mukurumbira wechiratidzo.
Tsika ye e-commerce iri kuchinja
Hakusi kungochinja chete. Becomes. Zviri kuramba zvichijairika kushandisa nharembozha pane kumirira kuve pakombuta kuti utenge online. Nhare mbozha dzave kuwedzerwa kwemunhu. Uye kutenga, nyore, uye «kungoita kamwe chete», ndizvo Ivo vari kuyedza uye vanoshanda mukutsigira vatengesi nekuti ivo vari mukati mekusvikwa kwe "zvishuwo."
Semuenzaniso, fungidzira uchifamba mumugwagwa uye unoona munhu ane mahedhifoni. Wakavafarira, ukavatsvaga ukawana chitoro. "Kudiwa" ikoko kuva navo, kunyangwe kana iwe usiri kunyatsovada, kunoita kuti iko kutenga iko nekukasira, pasina kumbomirira kusvika kumba, kana kuva nekombuta kuti uzviite. Ivo chete vanotarisisa pamitengo ndivo vanochengetwa (uye zvakadaro vanowanzo "tadza" kazhinji.
Sezvo rakagadzirwa yekutanga kutengesa pa internet, iyo nenzira yaive Sting rekodhi (kunyanya, Ten Summoner's Tales), ichiteverwa ne pizza paPizzaHut, makore mazhinji apfuura. Shanduko inotarisirwa nenyanzvi ndeyekuti e-commerce iri kufamba ichienda kunhare mbozha. Masocial network, echipiri-ruoko eCommerces, nezvimwe. ivowo poindi yekutevera nekutarisa. Iyo yekutanga nekuti ivo vanounza iyi "chitoro" padyo nenhamba hombe yevashandisi; uye yechipiri nekuti munguva dzekutambudzika, vazhinji vanotsvaga kutengesa kana kupa pawn.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » 10 Inonakidza Chokwadi Iwe Wausina Kuziva Nezve Ecommerce
Kuti denda rakachinja nzira yatinoshandisa hazvirambike, nekudaro, isu tinofanirwa kuziva maitiro, kunyanya e-commerce. Iwe unofanirwa kutarisira zvese zvakadzama, kubva pawebhu kuenda kupakeji yeCommerce.
Strategy on TikTok from 0 to 100 for Ecommerce